JonDoကို German တက္ကသိုလ်၏ Java Anon Proxy (JAP) ဟုခေါ်သော project တစ်ခုအဖြစ်တီထွင်ခဲ့ပြီး ၎င်းသည်Tor ကဲ့သို့ အမှီအခိုကင်း server (independent servers) များ ကို ဖြတ်၍ အလုပ်လုပ်သည့် anonymity tool တစ်ခုအဖြစ် လူသိများလာခဲ့သည်။
Tor နဲ့မတူတာကတော့ JonDo network သည် volunteers များ run သော server များ နှင့် parent company မှ server များကို ရောထားခြင်းဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသူများသည် 30-50kBit/s (analog modem connection လောက်ရှိတဲ့မြန်နှုန်း) နှင့် 600kBit/s ထက် နဲတဲ့ connection နှစ်ခုကို ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ ပထမတစ်ခု ကတော့အခမဲ့ဖြစ်ပြီး ဒုတိယတစ်ခုကိုတော့ ပိုက်ဆံပေးသုံး ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့် ဈေးနှုန်းများကို https://anonymous-proxy-servers.net/en/payment.html တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
Contact form: https://anonymous-proxy-servers.net/bin/contact.pl?
JonDo network ကို အသုံးပြုရန် သင်၏ Operating system အတွက် https://www.jondos.de/en/download မှ JonDo client ကို download လုပ်ရန် လိုအပ်သည်။ OS အမျိုးမျိုးအတွက် version အမျိုးမျိုး ရနိုင်သည်။ Linux အတွက် (9MB), Mac OS X အတွက် (17MB) အတွက် နှင့် Windows အတွက်(35MB) တို့ဖြစ်သည်။
Window user တွေကတော့ JondoFox web browser ကို install လုပ်ကောင်းလုပ်ရလိမ့်မည်။
JonDo ကို စတင်အသုံးပြုလျှင် ဘာသာစကားများ ကို ရွေးချယ်နိုင်သော window ကို အရင် တွေ့ရလိမ့်မည်။
ဒုတိယစာမျက်နှာတွင် အသုံးပြုနေစဉ်အတွင်း ကြည့်နိုင်သော level of detail ကို ရွေးနိုင်သည်။ အသုံးမပြုဘူးသေးသော လူများ အတွက် “Simplified view” ကို ရွေးချယ်သင့်သည်။
နောက် screen ပေါ်တွင်တော့ installation assistant မှသင့်အား JonDo proxy tool အသုံးပြုမည့် web browser ကို ရွေးချယ်ခိုင်းလိမ့်မည်။ သင့် browser အမည်ပေါ်တွင် click လုပ်ပြီး instructions အတိုင်းလိုက်လုပ်ပါ။
ပြီးပြီ ဆိုတာနှင့် JonDo မှ သင့် configuration ကို test လုပ်ခိုင်းလိမ့်မည်။ Control panel တွင် anonymity ကို off လုပ်ပါ။ ပြီးနောက် သင် configured လုပ်လိုက်သော browser နှင့် web site တစ်ခုကို ဖွင့်ပါ။
အကယ်၍ warning တစ်ခုပေါ်လာသည်ဆို လျှင် “Yes” ကို နှိပ်ပြီး web site ကိုကြည့်ပါ။ အကုန်လုံးကို လုပ်သင့်သည့်အတိုင်း configured လုပ်ပြီးပြီဖြစ်ပြီး “The warning is shown. Websurfing is possible after confirmation” ကို select လုပ်ပါ။ အခြားသော ဖော်ပြချက်များ ပေါ်လာလျှင်လည်း choose လုပ်ပြီး installation assistant မှ မည်သို့ ဖြေရှင်းရမည်ဆိုသော information များကို ပေးလိမ့်မည်။
Proper configuration ကိုသေချာစေရန် ဒုတိယ အဆင့်ကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရမည်။ control panel ထဲက anonymity ကို “On” သို့ပြောင်းပြီး သင် configured လုပ်ထားသော browser ဖြင့် web site တစ်ခုကို ဖွင့်ပါ။
Web site မှ loading လုပ်ပြီ ဆိုလျှင် အကုန်လုံးအဆင်ပြေသည်ဟုယူဆ ၍ရပြီး “Connection established, websurfing is fine” ဆိုသော စာတန်းပေါ်တွင် click လုပ်လို့ရပြီဖြစ်သည်။ အခြားသော ဖော်ပြချက်များ ပေါ်လာလျှင်လည်း choose လုပ်ပြီး installation assistant မှ မည်သို့ ဖြေရှင်းရမည်ဆိုသော information များကို ပေးလိမ့်မည်။
အခုဆိုရင်ပြီးခါနီးအဆင့်ကို ရောက်လာပါပြီ။ JonDo network မှတစ်ဆင့် အသုံးပြုရန် သင့် browser ကို အောင်မြင်စွာ configured လုပ်နိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။ information များ leak မဖြစ်အောင်လည်း သင့် browser ကို configure လုပ်ထားသင့်သည်။ ထို process ကို စတင်ပြုလုပ်ရန် သင့် browser ၏ အမည်ပေါ်တွင် click လုပ်ပါ။
အကယ်၍ standard JonDo server များကို သင့်နိုင်ငံမှ block လုပ်ထားလျှင် anticensorship option ကို သုံးကြည့်ပါ။ Control panel မှ “Config” ကို click လုပ်ပြီး Network tab ကို select လုပ်ပါ။ “Connect to other JAP/JonDo users in order to reach the anonymization service” ကို click လုပ်ပါ။ ပေါ်လာသော warning ကိုဖတ်ပြီး “Yes” ကို click လုပ်ပါ။
သင့် browser အား မှန်ကန်စွာ configured လုပ်ထားခြင်း ရှိမရှိ စစ်ဆေးလိုလျှင် https://what-is-my-ipaddress.anonymous-proxy-servers-net တွင်စစ်ဆေးနိုင်သည်။ ၎င်းမှ သင့်အား ပြဿနာ တစ်စုံတစ်ရာရှိလျှင် ဖော်ပြပေးလိမ့်မည်။
ပိုမိုစိတ်ချရစေရန် အတွက် JonDoNym team မှ JonDoFox ဟုခေါ်သော modified firefox web browser တစ်ခု ဖန်တီးပေးထားသည်။ ၎င်းသည် Tor browser bundle ကဲ့သို့ပင် anonymiztion tool ကို အသုံးပြုနေစဉ်အတွင်း information leaking ဖြစ်ခြင်းကိုကာကွယ်ပေးသည်။
ထို tool ကို https://anonymous-proxy-servers.net/en/jondofox.html တွင် download လုပ်နိုင်သည်။